SomaliaReport: Puntland oo Dhulka Kaga Hotagaysa B/badeedda
Saraakiisha amaanka ee maamulka Puntland ayaa bilaabay hawlgalo lagaga hortagayo ashkhaasta iyo ficilada ku lug leh budhcad badeednimada ka dib markii cadaadis caalami ah la dul saaray is maamul goboleedkan loogana dalbaday inay dhulkooda wax kaga qabtaan arntan.
Cutubyada ka hortagga arimaha B/badeedda ee Puntland ayaa caasimadda gobolka, magaalada Garoowe maalmihii u danbeeyey ka sameeyey hawlgallo lagu raadinayey koox b/badeed ahayd oo lagu soo waramay inay soo galeen magaalada ka dib markay soo qaateen lacag madax-furasho ahayd oo lagu qiyaasay 4 ilaa 6 milliyan oo dollar lagana qaatay markab nooca xamuulka qaada ah oo laga lahaa dalka Liberai, MV Reaur, kaasoo la sii daayey dhamaadkii bishii April muddo afar bilood ahayd oo la haystay ka dib.
Guddoomiyaha saldhigga bilayska ee Garoowe, mudane Cadi Dhagaf ayaa ku yidhi wargayska Somalia Report “ mudo ayaan ku daba jirnay kooxdan soo gashay magaalada, ma garan karno inta ay yihiin, waxaase lagu qiyaasay mid ilaa laba qof”.
Dhagaf ayaa sheegayin ilaa toban ruux lagu qabtay caasimadda oo kaliya,baadhitaano kalena ay socdaan.saddex ka mid ah kuwa la qabtay ayaa gacanta lagu soo dhigay iyaga oo qayilaya. Waxaana la filayaa in laga helo xog ku saabsan markabkii la afduubtay iyo dhamaanba rakaabkii saarnaa oo ay ku jiraan toddobo Danish ahayd oo saarnaa markabka MV Dover. Waxaa sidoo kale la rajaynayaa in laga helo xog tilmaamaysa cidda ka danbaysay B/badeedda ee maalgalisa.
Bilayska ayaa waddooyinka u muhimsan ee magaalada soo gala iyo kuwa dhanka koonfur uga baxaba dhigtay isbaarooyin, waxaa sidoo kale lagu wargaliyey inay ada u feejignaadaan. Ciidanka amaanka ayaa iyagana hawlgalo loogu diray magaalooyinka kale sida Eyl, Bandera bayla iyo Baragal. Dhagaf ayaa aaminsan in sare u qaadidda amaanku ay jab ku tahay B/badeedda, wuxuuna ballan qaaday inay ciidanka amaankuna ay gacan bir leh kaga hor tagi doono falalkooda.
Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso oo xaaladdooda amni sare loo qaaday airmo la xidhiidha hawlgallada B/badeedda ayaa lagu qabqabtay dad badan. mid ka mid ah saraakiisha ku sugnayd baraha la dhigay isbaarooyinka ayaa wargayska Somalia Report u sheegay in sare u qaadidda amaanka ay sidoo kale qayb ka tahay falal argagixisanimo iyo khaarajin ka imanaysay koox ku lug xidhan hoggaamiyaha ururka taxaalufka la leh Al-shabaab ee la yidhaa Maxamed Siciid Atam.
Tallaabo La Mahadiyey
Cali Jaamac oo ah khabiir aadna u dhaliila sida ay Puntland u xakamayso B/badeedda iyo arimaha la xidhiidha ayaa u sheegay wargayska Somalia Report in talaabadani ay tahay mid loo riyaaqay balse laga war sugayo inay guul ku dhamaan doonto iyo in kale.
“ Waxaad mooddaa inay dawladdu hadda ku bararaugtay sumcad xumada ay b/badeeddu noo keeneen, waxaanan boogaadinaynaa hawlahan ay dawladdu ka fulisay gobolka, balse waxaa sii hadhay dadaalo badan.” Ayuu yidhi mudane Jaamac. “Bulshadu waxay u baahan tahay wacyigalin ku aaddan khatarta kala soo gudboonaan karta b/badeedda, sidoo kalena si da’yarta hankooda looga weeciyo arimaha b/badeedda, dawladdu waa inay abuurto ilo dhaqaale. Waa inuu jiro ajende muujinaya arimahan. Su’aashu waxay hadda noqonaysaa xaggee la gayn dadka falalkan b/badeednimo ka soo laabta.”. ayuu Jaamac sii raaciyey.
Shacabkii oo ka Daalay B/badeedda
B/badeedda ku sugan Puntland ayaa waxaa soo wajahay weeraro iyo qabqabsho kaga yimid dhanka bilayska iyo cutubyada sida khaaska ah u tababaran ee ka hortagga b/badeedda. Saraakiisha Puntland ayaa sheegay in meelaha kaliya ee ay kooxahani ku hadheen ay tahay Garacad iyo dhul-xeebeedka ku hareersan. Balse khuburada u dhuun-duleesha wararka badda ayaa aaminsan in sheegashadaasi ay tahay mid laga badbadiyey.
Ayl, Baargal iyo Bardarabayla oo wada ahaa rugta b/badeedda ayaa dadkii ku noolaa waxay ka daaleen falalka danbi ee guracan ee ay u keeneen kooxahan b/badeed. Shacabka deegaankaa ayaa isu bahaystay ka hortagga iyo la dagaalanka kooxahan, waxayna ku qasbeen inay ka sifeeyaan magaalooyinkooda.
Siciid Aadan oo ah duqa magaalada Bandara bayla ayaa lagu tiriyaa dadka ugu firfircoon arimaha la dagaalanka b/badeedda. Wuxuuna wargayska Somalia Report u sheegay inuu ku qanacsan yahay inay dadka Soomaaliyeed meel uga soo wada jeedsan doonaan ka hortagga b/badeedda.
“Waxaan ku faraxsanahay sida ay bulshada reer Bandara bayla u muujiyeen ka dhan-ahaanshahooda falalka b/badeed iyo sida geesinimo ee ay uga eryeen magaalooyinkooda. Soomaalidu way ka daashay ficilada iyo tusaalooyinka guracan ee ay dadkeena ka bixiyeen.